Run Dialog Box ကို Disable ပြုလုပ်ထားခြင်း - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home IT Knowledge Run Dialog Box ကို Disable ပြုလုပ်ထားခြင်း
Run Dialog Box ကို Disable ပြုလုပ်ထားခြင်း
U Oo Cracker at 3:04:00 PM IT Knowledge,
Run Dialog box ဟာ Windows ပေါ်မှာ အသုံးများတဲ့ Tools တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Run box ကနေ Windows အတွင်းရှိ လုပ်ဆောင်ချက် အတော်များများကို command များဖြင့် ရိုက်ထည့်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Run box ကို အသုံးမပြုစေချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ပိတ်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Run box ကို disable ပြုလုပ်ဖို့အတွက် Registry နဲ့ Group Policy တို့ကနေ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Run box ကို Registry ကနေ ပိတ်ဖို့အတွက် Win + R key ကိုနှိပ်ပြီး Run box ကို ခေါ်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် regedit ဆိုတဲ့ command ကို ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ Registry editor ထဲကို ရောက်သွားပြီဆိုရင် HKEY_CURRENT_USER\_SOFTWARE\_Microsoft\_ Windows\_Current\_Version\_Policies ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်းစီ သွားရပါမယ်။ Policies အောက်ကို ရောက်ပြီဆိုရင် Policies ကို Right click နှိပ်ပြီး New > key ကို ရွေးချယ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးသွားရင် Explorer ဆိုတဲ့ အမည်ကို ပေးလိုက်ပါ။
Explorer အမည်ပေးပြီးရင် ညာဘက်အခြမ်း panel မှာ Right click နှိပ်ပြီး New > DWORD (32bit) Value ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပေးရပါမယ်။ ဖိုင်နာမည်ကို No Run လို့ အမည်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် အဆိုပါ ဖိုင်ကို Double-click နှိပ်ပြီး Value data မှာ 1 လို့ သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါ။ သတ်မှတ်ပြီး သွားပြီဆိုရင် Ok button ကို နှိပ်ပြီး Registry ကနေ ထွက်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Run box ကို registry ကနေ disable ပြုလုပ်တဲ့ အဆင့်ပြီးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Group Policy ကနေ Run box ကို disable ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် Run box ကနေ gpedit.msc ဆိုတဲ့ command ကို ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ Group Policy Editor box ကျလာရင် User Configuration -> Start Menu and Taskbar ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးသွားရင် Remove Run menu from Start Menu ဆိုတာကို ရှာပါ။ တွေ့ပြီဆိုရင် double-click နှိပ်လိုက်ပါ။ အဆိုပါဖိုင်ကို double-click နှိပ်ပြီးရင် Enable ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပေးပြီး Group Policy ကနေ ထွက်လိုက်ရင် Run box ကို disable ပြုလုပ်တဲ့ အဆင့် ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီ Post လေးကို... Normal Beginner သမားများအတွက်...သာ ရည်ရွယ်၍ ပြောပြ ဖြေရှင်းပေးခြင်းသာ... ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်ကို ဖောင်းထုကာ လာရောက်ဆဲဆိုမည်ဆိုရင်တော့... ကိုယ့်အကျင့်စရိုက်ကို သက်သက်ဖော်ပြတာနဲ့တူတူပဲနော်...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်က... Beginner တစ်ယောက်မို့... ကူးယူဖော်ပြရင် Credit ကို လေးစားစွာ ပေးမယ်... ကိုယ်ပိုင် ဝေမျှရင်တော့... လွပ်လပ်စွာ... ပြောဆိုမယ်...
အားလုံးပဲ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ...လို့ ကျွန်တော် ချမ်းမြေ့မောင်မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...နော်...။ :)
Back To Top and godown
မိမိရဲ့ဘလော့Comment အရေအတွက် Bubble Icon လေးနဲ့ပေါ်...
Android Software အတန်းကို Advanced only ပဲ တက်ချင်...
PC ကွန်ပြူတာတွေအတွက် 10TB hard drive အသစ်ကို Seaga...
Huawei P8 Lite B530 ဖုန်းကို Stock Android 6.0 OTA...
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး တစ်မျိုးကို WHO ပထမဆုံး...
Huawei Mate S B355 ဖုန်းကို Marshmallow တင်နည်း - ...
Ascend G7 B530 ဖုန်းကို Stock Android 6.0 OTA Rom ...
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H ဖုန်း ဗားရှင်း...
မိမိဘလော့မှာ Content Wiget လေးထည့်မယ် ၂
မိမိဘလော့ Popular Post မှာ No တွေတပ်ချင်ရင်
Ubuntu OS တွင် Fanbox ထည့်သွင်းခြင်း- by CHAN LAY ...
အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်၏ ပညာရေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်
Linux အတွက် ထိပ်တန်း Screen Recorder ၅ ခု
Instant Articles feature အထောက်အပံ့ကို Messenger တ...
Ubuntu 16.04 တွင် Gedit ထည့်သွင်းခြင်း - by CHAN L...
Ubuntu OS ရဲ့ Terminal ကနေ ရာသီဥတု အခြေအနေတွေကို ဘ...
Huawei G8 B321 ဖုန်းကို Android 6.0 OTA Stock Rom ...
မိမိရဲ့ ဘလော့ Post တွေကို Copy ယူမရအောင်ကာကွယ်နည်း
မိမိဘလော့မှာ Content Wiget လေးထည့်မယ်
Fireebook Duplicates Finder
Samsung S4 Mini E370K 4.2.2 international Rom by C...
Home Android Tutorial Lollipop and Marshmallow ဗား...
ပြိုင်ဘက် AVG ကို ဒေါ်လာ ၁.၃ ဘီလျံဖြင့် ဝယ်ယူရန် Av...
Samsung All Korean Models Firmware များဒေါင်းလော့ရ...
Huawei တွေရဲ့ FRP Lock ကို Bypass ပြုလုပ်နိုင်တဲ့...
Adobe After Effects CC 2015.3 13.8.0.144 RePack | ...
Adobe Premiere Pro CC 2015.3 10.3.0 (202) (2016) |...
Youth of the most popular songs...
Huawei y6 (Honor 4A) ဖုန်းကို TWRP Recovery ထည့်သွ...
Hawei G730 U00 အတွက် Step2fail Fixed fiiles by ...
မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း နည်းပညာဖြင့် အသက်မွေဝ...
လူငယ်တွေကြား Popular အဖြစ်ဆုံး သီချင်းလေးကို Downl...
NCH PhotoStage Slideshow Producer 3.43 Crack Full ...
Apowersoft Video Download Capture 5.1.8 Crack Full...
Movavi Screen Capture Studio 7.1.0 keygen Full ၊ 7...
AnyMP4 Screen Recorder v1.0.20 Crack - Full | 17.9 MB
Business Card Designer Pro V11.6.0.0 Portable ၊19....
Format Factory 3.7.5 Portable [ 59.5 MB]